Indlela yokufundisa umntwana ukuba asele kwikomityi | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 14/05/2022 12:24 | Iintsana
Ukuba umntwana ulawula ukusela kwiglasi yimpumelelo yangempela ehlala ifanelwe ukuhlaziywa. Ngaphandle kophuhliso olubalulekileyo kwimbono yokukhula, isenzo sokusela kwiglasi sithetha ukuqhubela phambili ngokweemvakalelo kumncinci. Iingcali zincoma ukususa ibhotile ngaphambi kweminyaka emibini ubudala ukuphepha iingxaki zomlomo ezizayo.
Kwinqaku elilandelayo sikunika izikhokelo oko kunokukunceda ufundise usana lwakho ukusela ngekomityi.
1 Yitya njengentsapho
2 Sebenzisa ikomityi yokufunda
3 Dlala imidlalo yezandla
4 inyathelo lokugqibela
Xa ufundisa indlela yokusela kwiglasi, kuyacetyiswa ukuba kutye njengentsapho. Iintsana zidla ngokufunda ngokuxelisa abazali bazo. kungoko kulungile ukusela phambi komncinci. Ngaphandle kokukunceda ukuba usele ngokuzimeleyo nangokuzimela, ukutya njengentsapho kubandakanya ukufundisa imikhwa elungileyo kwasebuntwaneni.
Sebenzisa ikomityi yokufunda
Akunakwenzeka ukwenza ngathi umntwana ufunda ukusela kwiglasi ngqo kwi-bat. Okokuqala kufuneka umnike iglasi yokufunda. Olu hlobo lweglasi yenzelwe iintsana njengoko inesiciko esingadonsi-driphu kunye nezibambo ezenza kube lula ukuyibamba ngaphandle kwengxaki.
Abazali abaninzi benza impazamo enkulu yokuvumela indebe yokufunda ibe yeyokugqibela.. Kuyinyani ukuba iglasi ekhululekile ngakumbi kubazali kuba ibala kancinci. Umkhumbi wokufunda kufuneka ube nomsebenzi ophambili wokuba ngumkhumbi wenguqu ukuya kwinto eya kuba yinqanawa yokugqibela.
Dlala imidlalo yezandla
Ngexesha lokusela ngaphandle kwengxaki kwiglasi eqhelekileyo, umntwana kufuneka abe ne-dexterity ezandleni. Kule nto kukho imidlalo ethile yezakhono zezandla ezinceda ukuvuselela ukuhamba kwezandla. Nantoni na ihamba ukwenzela ukuba omncinci aphele ebambe iglasi ngokufanelekileyo.
Nje ukuba umntwana aphathe ngaphandle kwengxaki ngendebe yokufunda, lixesha elifanelekileyo lokumnika indebe yokugqibela. Kungcono ukumnika indebe yeplastiki ukuze aqale ukuziqhelanisa ngaphandle kweengxaki kwaye akukho mngcipheko wokuwaphula. Khumbula ukuba umntwana uyafunda ngoko kuyinto eqhelekileyo ukuba achithe amanzi ekuqaleni. Abazali kufuneka bazixhobise ngomonde kuba ingeyonto enokuzuzwa ngobusuku nje obunye. Ngokuziqhelanisa kunye nexesha elide, omncinci uya kukwazi ukusela kwiglasi ngaphandle koncedo lomntu.
Ngamafutshane, inkqubo yokusela kwiglasi yahlukile kumntwana ngamnye. Kukho abanye abayifumana ngexesha elifutshane kwaye abanye banengxaki. Yiyo loo nto kufuneka ube nomonde kwaye uzole. Akukho mfuneko yokuyingxamela nangaliphi na ixesha kuba iyinto ekufuneka yenziwe ngaphandle koxinzelelo. Into ebalulekileyo kukuba umntwana akwazi ukusela yedwa kwaye amdumise xa ephumelele. Ukusela kwiglasi enye inqanaba ekuphuhliseni abantwana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Iintsana » Indlela yokufundisa umntwana wakho ukuba asele kwikomityi